न्यूज सञ्जाल: » मिस्टर ग्यालेक्सीमा को के भए ? (फोटो फिचर)
मिस्टर ग्यालेक्सीमा को के भए ? (फोटो फिचर)
न्यूज सञ्जाल १५ भाद्र २०७६, आईतवार १०:३४
त्यस्तै, क्रिकेट खेलमा लागेर समाजमा योगदान पुर्याएका विनित बाँस्तोला र भलिबल र टेनिस खेलमा आवद्ध भएर खेलको विकासमा पुर्याएको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै आयोजकले विमान खड्कालाई पनि सोही समारोहमा सम्मान गर्यो । उनीहरुलाई पनि जनही ५-५ हजार नगद प्रदान गरिएको थियो ।
१२औँ साउथ एसियनमा रजत पदक विजेता बनेकी काठमाडौँबाट आएकी रजनी श्रेष्ठले कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुतिका रुपमा डेमोस्ट्रेशन शो प्रदान गरिन् ।
मिस्टर काठमाडौँ र मिस्टर हिमालयकी गोल्ड मेडलिस्ट रजनीले शारीरिक सुगठनको क्षेत्रमा महिलाहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि प्रस्तुति दिएकी हुन् । उनी झापाली चेली पनि हुन् ।